ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့် .. .. | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
← အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 22
ဗုဒ္ဓဘာသာကို စတန့်ထွင်ပြီး ဖျက်ဆီးသော .. အဖွဲ့ →
ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ကြည့် .. ..
Posted on June 17, 2011 by chitnge
“ဖြစ်ပျက်ကို မြင်အောင်ကြည့်” ဆိုသောစကားရှိသည် –
ဖြစ်ပျက်ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာဖြစ်သည်။ ခန္ဓာသည် လူနာဖြစ်သည်။
မြင်အောင်ကြည့် ဆိုရာ၌ – မြင်သောသဘောသည် ဆရာဝန်က လူနာ၏ ရောဂါကို သိမြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဖြစ်ပျက်ကို မုန်းအောင်ကြည့် ဆိုသည်မှာ – လူနာခံစားရသော ရောဂါကို မလိုလားရချေ၊ မလိုလားခြင်းသည် မုန်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မုန်းသဖြင့် ထိုရောဂါ အလျှင်အမြန် ပျောက်ကင်းရန် ရောဂါပျောက်စေသောဆေးဖြင့် ကုသသည်။ ထို့အတူ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာ၏ ဖြစ်ပျက်ကို ဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်၍ ဉာဏ်သည် ရုပ်နာမ်ကို မုန်းကာ မလိုချင်သော သဘောဖြင့် စွန့်ပယ်အပ်ခြင်း သဘောရှိသည်။ ယင်းကို “ကိလေသေ မာရန္တော နိဗ္ဗာနံ ဂစ္ဆတီတိ မဂ္ဂေါ” ဟူ၍ ပါဠိဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည် – ‘ရုပ်နာမ်ကို နှစ်သက်သော သမုဒယအား သတ်သောမဂ်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ သွားသည်’ ဟူသော အဆိုရှိသည်။ ရောဂါကို မုန်းသောသဘောရှိ၍ ရောဂါကို ပျောက်ကင်းရန် ကုသချေမှုန်း ပစ်လိုက်သည်။ ဤအခါ ဖြစ်ပျက် ဆုံးသွားသည်။
ဥပမာအားဖြင့် ရောဂါ ကင်းစင်သွားသည်။ ထိုအခါ ရောဂါမှ လွတ်မြောက်သွားသည်။ ဖြစ်ပျက် ဆုံးသောအခါ – မဂ်ဉာဏ် ဖြစ်လာသည်။ မဂ်ဉာဏ်သည် နိဗ္ဗာန်သို့စံသည်၊ ရုပ်နာမ်သည် နိဗ္ဗာန်သို့ စံသည် မဟုတ်ပါ။ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် အရိယာ ဉာဏ်များသာလျှင် – နိဗ္ဗာန်သို့စံသည်။ ရုပ်နာမ်သည် ဤ (၃၁) ဘုံ ထဲ၌ ကျန်ခဲ့သည်။ ထို့အတူ လူနာ၏ရောဂါ ပျောက်သောအခါ လူနာသည် ရောဂါမှ လွတ်မြောက် သွားသည်။ ဤနေရာ၌ ရောဂါမှ လွတ်မြောက်သော လူနာသည် နိဗ္ဗာန်အရာ မဟုတ်ပါ။ လွတ်မြောက်အောင် ကုသလိုက်သော၊ ရှုသတ်လိုက်သော မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်သာလျှင် နိဗ္ဗာန်သို့ သွားသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုင်းခြားအပ်သော သဘောရှိရလေသည်။ ခန္ဓာကို (၃၁) ဘုံ၌ ထားခဲ့၍ ဉာဏ်ပညာသည် အရိယာ မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် ဖြစ်သောအခါ မိမိရုပ်နာမ်ကို ပိုင်းခြားကာ နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုသွားသည်။
ဤသဘောကို စောကြောနားလည်သောအခါ ၀ိပဿနာ ရှုရကျိုးနပ်၍ အရိယာဖြစ်ခြင်း၌ မြန်ဆန် တိကျနိုင်သည်။
Tags: Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာဝန်, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်
This entry was posted in Buddhism and tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာဝန်, နိဗ္ဗာန်, မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်. Bookmark the permalink.
Total Visitors : 7324
Today Visitors : 63